1 sano 10 bilood ka hor #626 by degu
topic ayaa qufulan.
1 sano 10 bilood ka hor #627 by Gh0stRider203
Ma hubo waxa aad weydiinaya. Ma waxaad isweydiinaysaan uusan u-MiG 23 leeyihiin afterburner?
1 sano 10 bilood ka hor #628 by rikoooo
Ha aad rabto in aan kuu imaado oo waxaad ku tidhaahdaa "nacas?" Sababta oo ah waxa ay si sax ah sida fariin u eg, ma waxaad ku Dhahaysaan ha hello, aadan akhlaaq leh oo aad xitaa ma dhigi xukun sax ah.